Ciidamada Yahuudda oo toogasho ku dilay Saxafiyad ushaqeynaysay Telefeshinka Al Jazeera.
Wednesday May 11, 2022 - 15:14:34
Aroornimadii hore ee saakay ciidamada Maamulka Yuhuudda ayaa weerar ku qaaday Magaalada Al-Janiin ee dhacda Daanta-Galbeed, Waxaana Weerarkaas ka dhashay khasaarooyin kala duwan.
Shariin Abu Caqla oo ahayd saxafiyad u shaqayn jirtay telefishanka Aljazeera ayaa saaka lagu toogtay magaalo lagu magacaabo Janiin halkaas oo ciidamada Yuhuuddu xoog ku galeen.
Saxafiyaddan ayaa rasaas nool madaxa lagaga dhuftay xilli ay ku gudo jirtey hawleheedii shaqo. Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Shariin ay xidhnayd jaakeetkii saxafiyiinta lagu yaqaannay markii la toogtay.
Tacsida saxafiyaddan ayaa aad u qabsatey baraha bulshada iyada oo falkani caddayn u yahay cadaawadda qotoda dheer ee Yuhuuddu u hayaan shucuubta muslimka ah iyo saxaafaddaba.
Shariin waxa ay ku dhalatey magaalada Beytu Laxam sannadkii 1971-kii. Haseyeeshee waxa ay ku kortey oo ku barbaartey sida la sheegay magaalada Qudus, maanta ayaana lagu diley xerada Janiin halkaas oo Falastiiniyiintu deggan yihiin.
Al-Jazeera ayaa si kulul u cambaareysay dilka ay ciidamada Yuhuudda ugeysteen haweenaydaan iyaga ushaqeynaysay.
Waa dil argagax leh oo dillaacinaya qawaaniinta iyo halku dhigyada dowlliga ah ee ay sheegtaan Yuhuudda, kuwaas oo ku xad gudubay warbaahinta xurta ah ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay shabakadda Al-Jazeera.
Bayaanka ayaa sidoo kale aad loogu cambaareeyay dilkaan, Waxaana lagu sheegay in looga gol leeyahay in lagu aamusiyo warbaahinta, mas'uuliyadda dilkaan ayayna shabakaddu sheegtay inuu dusha uridanayo Maamulka Yuhuudda.